Iflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini weengxaki okanyex Biches - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini weengxaki okanyex Biches
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguBilly
UBilly ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex elungiswe ngokutsha netofotofo ejonge ekukhanyeni kwemini entle iza kukwenza uzive usekhaya ngoko nangoko. Inamagumbi okulala ayi-3 kunye nebhalkhoni. Yindawo yemozulu epheleleyo ecetyiswayo kwabo bayayixabisa imvelaphi nokuzola.
Isembindini wedolophana entle yaseC Trou aux Biches. Ifumaneka kwimizuzu eyi-12 kuphela xa uhamba ngeenyawo ukuya kwindawo ethi Ingxaki okanyex Biches yoluntu ngoxa idlula kwivenkile enkulu, i-minimart, iikhefi, ivenkile yokubhaka kunye neevenkile zokutyela. Le ndawo ingamkela abantu abayi-2 ukuya kwabayi-6.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex eyi-76 m2, kumgangatho wesibini wendawo yokuhlala yabucala inendawo yokupaka, isango lombane kunye nokhuseleko imini nobusuku. Ikhitshi livuliwe kwindawo yokuhlala etofotofo kunye nendawo yokutyela. Iquka isitovu segesi, ifriji, iketile yombane, i-microwave kwaye inento yonke. Isinki sisitya esiphindwe kabini kwaye sinamanzi ashushu.
Igumbi lokuhlambela likhumbuza i-vibe yetropiki. Ineshawa enamanzi ashushu nazo zonke izinto eziyimfuneko.
Ingxaki okanyex Biches yilali yabalobi ekumantla-ntshona wesiqithi enamalwandle amahle kufutshane. Indawo ethe cwaka enezinto ezahlukahlukeneyo; i-ATM, iofisi yeposi, ivenkile enkulu, ivenkile yezinto ezibhakiweyo, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye nesikhululo sePetroli.
Umbuki zindwendwe ngu- Billy
Ndihlala ndifumaneka kwifowuni yam.